Any Questions? မွန်ပြည်နယ်အစီအစဉ် (ဒုတိယပိုင်း) - DVB
Any Questions? Lead Story ဆောင်းပါး တိုင်းရင်းသားရေးရာ လွှတ်တော်ရေးရာ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ
Any Questions? မွန်ပြည်နယ်အစီအစဉ် (ဒုတိယပိုင်း)
၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် ပါတီတွေကို ပထမဆုံးအကြိမ် မဲပေးကြမယ့် First time voters? လူငယ်တွေက သူတို့သိလိုသမျှတွေကို မေးမြန်းပြီး ပါတီတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေက ပြန်လည် ဖြေကြားပေးမယ့် Any Questions? အစီအစဉ်ကို DVB TV ကနေ တင်ဆက်ပေးနေရာမှာ ဒီတပတ်မှာ မွန်ပြည်နယ် အစီအစဉ် ဒုတိယပိုင်းကို တင်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မော်လမြိုင်ခရိုင်မှာပါတဲ့ မုဒုံမြို့ဟာ တချိန်က မွန်ဘုရင် ထီးနန်းစိုက်ခဲ့တဲ့မြို့၊ မြန်မာလို အစွန်ကျသောမြို့လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်လွန်လောက်က အရပ်ရှစ်မျက်နှာအလိုက် ထောင့်ရှစ်ထောင့်ရှိတဲ့ သွပ်မိုးဇရပ်ကို အစွဲပြုပြီး ခေါ်ခဲ့တဲ့ သံဖြူဇရပ်ဟာ မော်လမြိုင်ခရိုင်ထဲမှာ ပါတာပေါ့။ သေမင်းတမန် မီးရထားလမ်း၊ အင်္ဂလိပ်စစ်သင်္ချိုင်း၊ ကျိုက္ခမီရေလယ်ဘုရားနဲ့ စက်စဲကမ်းခြေတို့ တည်ရှိပါတယ်။ ရေးမြို့နယ်ထဲက မော်လမြိုင်ခရိုင်ရဲ့ တောင်ဘက်အစွန်းမြို့နယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၂၀၀ ကျော်ကတည်းက ထားဝယ်ဒေသရဲ့ မာရာဒေဝီမင်းသမီး စတင်တည်ထောင်ပြီး ဓမ္မစေတီမင်း ပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့တဲ့မြို့၊ မွန်လိုတော့ ဒိန်းရီမြို့လို့ ခေါ်တာပေါ့။ ကျိုက်မရောမြို့နယ်ဟာ မော်လမြိုင်ခရိုင်မှာ ပါဝင်ပါတယ်။ မွန်ဘုရင်မကြီး ရှင်စောပု တည်ထားခဲ့တဲ့ ဆုတောင်းဝတ်ကျောင်းတော်ကြီး တည်ရှိပါတယ်။ ရှင်စောပုဘုရင်မ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ရွှေခေါင်းဆောင်း သရဖူတစ်ခု လန်ဒန်မြို့က ဝိတိုရိယပြတိုက်နဲ့ အဲလ်ဗတ်ပြတိုက်တို့မှာ အခုအချိန်အထိ ပြသထားပါတယ်။
မွန်ပြည်နယ်အကြောင်းပြောရင် မော်လမြိုင်ကို ချန်ထားလို့ မရပါဘူး။ ကျိုက်သလ္လံရဲ့ ကြည်နူးလွမ်းဆွတ်ဖွယ်ရာ ဆည်းလည်းသံရဲ့ ညှို့ငင်နိုင်စွမ်းက အင်္ဂလန်ရဲ့ မီးခိုးရောင်ကောင်းကင်ကို မေ့လျော့သွားစေခဲ့ပေါ့လို့ ကဗျာဆရာ ရုဒယဒ် ‘ကစ်ပလင်’ က တခမ်းတနား ဖွဲ့ရလောက်အောင် တင့်တယ်သာယာမှုနဲ့ ပြည့်စုံခဲ့တဲ့မြို့၊ ဗြိတိသျှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး ရုံးစိုက်ရာမြို့တော် ဖြစ်ခဲ့တဲ့မြို့၊ ကမ္ဘာကျော်စာရေးဆရာကြီး ‘ဂျော့ချ်အိုဝဲလ်’ ရုံးစိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့မြို့၊ ပထမဆုံးသော မြန်မာသတင်းစာ ‘မော်လမြိုင်ခရိုနီကယ်’ သတင်းစာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့မြို့၊ ‘သီရိပုဗ္ဗာရတနာဒေဝီ’ ခေါ် ‘စိန်တုံးမိဖုရား’ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့တဲ့မြို့၊ သီပေါဘုရင်ရဲ့ စတုတ္ထသမီးတော် ကံတော်ကုန်ခဲ့တဲ့မြို့၊ ပထမဆုံး အနောက်တိုင်းဆေးပညာ သင်ယူခဲ့တဲ့ မွန်အမျိုးသားကြီး ‘ရှောလူ’ ကြီးပြင်းခဲ့ရာမြို့၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ အင်ဒီယားနားမှာရှိတဲ့ ဖို့ဒ်ဝိန်းမြို့နဲ့ ညီအစ်မတော်အဖြစ် သဘောတူညီခဲ့တဲ့ ချစ်ကြည်ရေးမြို့ အဲဒီမြို့ကို တချိန်က မက်မွဲလို (မွတ်မော်လိုမ်) မွန်လိုခေါ်တွင်ခဲ့ရာက အခု ‘မော်လမြိုင်မြို့’ လို့ ခေါ်တွင်လာခဲ့တာပါ။ မွန်ဘုရင် ရာမညရာဇာမင်းလက်ထက် သံလွင်မြစ်၊ ဂျိုင်း၊ အထ္ထရံ၊ သောင်ရင်းမြစ်တို့ဆုံရာ ပြောင်းရွှေ့မြို့တည်ရာက မော်လမြိုင်မြို့ဟာ ဖြစ်ပေါ်မြို့တည် လာခဲ့တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
မွန်ပြည်နယ်ကို ခရိုင်နှစ်ခု၊ မြို့နယ်ဆယ်ခု ကျေးရွာပေါင်း ၁၁၅၂ ရွာနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ လူဦးရေပေါင်း ၂ ဒသမ ၁ သန်း နေထိုင်ပါတယ်။ မဲပေးနိုင်ခွင့်ရှိသူက ၂၀၁၉ ခုနှစ် ထုတ်ပြန်ချက်အရ ၁,၉၇၉,၃၃၀ ခန့်ရှိပါတယ်။ ပထမအကြိမ် မဲပေးနိုင်ခွင့်ရှိသူကတော့ ၂၁၂,၂၆၃ ဦးဖြစ်တယ်လို့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းအရ သိရပါတယ်။
လာမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာဆိုရင် မဲပေးနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူဟာ ၁ ဒသမ ၇ သန်းကျော် ရှိပြီးတော့ အဲဒီအထဲမှာမှ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် မဲပေးမယ့်သူက တစ်သိန်းကျော် ရှိပါတယ်။ မသန်စွမ်း မဲဆန္ဒရှင်ကတော့ ၄၀၀၀ ကျော် ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ မွန်ပြည်နယ်မှာ မဲရုံအရေအတွက်ပေါင်းက ၉၅၀ ကျော်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ဖြေကြားပေးဖို့ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီက နိုင်လယ်တမ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုပြန်ကြားရေးက မုံရွာအောင်ရှင် ၊ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ဦးဝင်းမော်ဦးနဲ့ ပြီးတော့ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်က ခွန်အောင်မျိုးသိမ်းတို့ကို ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်အတွက် ဗီဒီယိုနဲ့ ကြိုတင်ရယူထားတဲ့ မေးခွန်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အခု ပထမဦးဆုံး မေးမြန်းထားသူကတော့ မရွှေရည်ထူး ဖြစ်ပါတယ်။
မရွှေရည်ထူး- မေး။ ။ မေးချင်တာက ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ငြိမ်းချမ်းရေးရယ်၊ လူငယ်နဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးရယ်၊ ပညာရေးရယ်။
USDP- ဖြေ။ ။ ယခင်ကျနော်တို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအနေနဲ့ အစိုးရတက်ခဲ့စဉ်ကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေကို ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာလည်းပဲ အဖွဲ့အစည်း ၁၆ ဖွဲ့မှာ ၈ ဖွဲ့ အန်စီအေလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်တဲ့အထိ အကောင်အထည်ဖော်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးရင် ကျနော်တို့ နောက်ပိုင်းမှာ NLD အစိုးရလက်ထက် တက်လာတဲ့ အခါမှာလည်း နောက်ထပ် မွန်ပြည်သစ်ပါတီနဲ့ နှစ်ဖွဲ့ လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပါတယ်။ ထိုးတဲ့အခါကျတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ သမိုင်းကြောင်းနဲ့ သွားကြတာ ဖြစ်တယ်။ သို့သော်လည်းပဲ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများက နေပဲ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားနေကြပြီ၊ စဉ်းစားနေကြပြီ၊ ပြည်သူတွေကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားနေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျနော်တို့ပါတီအနေနဲ့ တာဝန်ယူရမှာကလည်း အစိုးရမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အထောက်အကူ ပြုနိုင်ခဲ့တယ်၊ အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ ပြီးရင်လည်း ကျနော်တို့ ပါတီက တာဝန်ယူရမယ်၊ လွှတ်တော်ထဲရောက်တော့မယ်ဆိုရင်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကို ကျနော်တို့ ဆက်ပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိတဲ့အထိ ကျနော်တို့ပါတီက အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားပါမယ်။ ဒါကတော့ မေးခွန်းတစ်ပေါ့နော်။
နောက် ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ လူငယ်နဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ခုနက NLD က ဆရာကြီးလည်း ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ကတော့ မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုတာက ကျနော်တို့နိုင်ငံတွင်းမှာမက တကမ္ဘာလုံးမှာလည်း ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာလည်းပဲ ကျနော်တို့ လူငယ်တွေမှာ၊ ခုနက သမီးလေးတစ်ယောက် ပြောသွားတာလည်း ကျနော် ကြားလိုက်ပါတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ လူငယ်တွေကို မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲတာကို အပြစ်ကြီးတစ်ရပ်အနေနဲ့ ခံယူရမှာကိုလည်း စိုးရိမ်နေတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကလေးကိုလည်း သွားတွေ့ပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဒီနေရာမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့ ရောင်းဝယ်ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်းဆိုတဲ့ အပိုင်းသုံးပိုင်းရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုတာက အားလုံးတပြိုင်နက် နယ်စပ်တွေမှာက တရားမဝင်ဘိန်းစိုက်ခင်းတွေလုပ်တယ်။ အဲဒီကနေ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ ထုတ်လုပ်ကြတယ်။ အဲဒါကိုမှ ဈေးကွက်တွေထဲကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ ကျနော်တို့ရဲ့ လူတွေဟာ မူးယစ်ဆေးဝါးသားကောင်တွေ ဖြစ်ကြရတယ်ပေါ့နော်။
အဲဒီတော့ ဒီနေရာမှာ လူငယ်လေးတွေကို ပြစ်မှုကြောင်းဆိုင်ရာအရ အရေးယူဆောင်ရွက် နေတာကျတော့ သူတို့ရဲ့အညွန့်ကို ချိုးလိုက်သလို ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့က ဒီဟာကို ပညာပေးတယ်၊ ပြန်လည်ထူထောင်ပေးတယ်၊ သူ့ကို မူးယစ်ဆေးဝါး မသုံးအောင် ပြန်ပြီး လုပ်ထားတယ်။ အဲဒီလိုဆောင်ရွက်ပေးရင်းနဲ့ သူ့ဘဝဟာ လူငယ်တွေရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်လောကထဲမှာ ပြန်ပြီးဝင်ဆံ့ပြီးတော့ သာမန်လူများနဲ့တန်းတူ အခွင့်အရေးများ ရရှိခံစားနိုင်ပြီးတော့ သွားနိုင်ဖို့အတွက် ကျနော်တို့ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးဖို့ လိုပါတယ်တယ်။ ဒါတွေကို ကျနော်တို့က ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူငယ်တွေလောကမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာဟာ ကျနော်တို့သိသလောက်ဆိုရင် ကျောင်းတွေကအစ ပျက်စီးနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ တည်ဆဲဥပဒေများရယ်၊ မူဝါဒတွေရယ် ပြန်လည် ဆန်းသစ်ပြီးတော့ ပိုပြီးတော့ ကောင်းမွန်အောင်၊ ပိုပြီးတော့ ထိရောက်အောင်၊ ပိုပြီးတော့ လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်မှု ရှိအောင် ကျနော်တို့ဆောင်ရွက်သွားရမယ်လို့ ပြောကြားလိုပါတယ်။
မပြည့်ဖြိုးဇော်- မေး။ ။ NLD ကိုမေးချင်ပါတယ်။ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး။ ပညာရေးကို ဒီထက်မက ပိုမိုဖြစ်ထွန်းအောင် လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။
မုံရွာအောင်ရှင်- ဖြေ။ ။ ကျန်းမာရေးလည်း ပိုပြီးတော့ ဘတ်ဂျက်ပေါ့လေ၊ နိုင်ငံရေးတော်ဘတ်ဂျက်ကို ပိုပြီးတော့ရအောင် ကျနော်တို့လက်ထက်မှာ အများကြီး လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ပညာရေးဆိုလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ဟိုးအရင့်အရင် အစိုးရတွေ လက်ထက်ထက် ပညာရေးအသုံးစရိတ်ကို ပိုရအောင် ကျနော်တို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် တနိုင်ငံလုံးမှာ ပညာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ကျောင်းတွေ၊ ပညာရေးအလုပ်သမားတွေ အများကြီး ကျနော်တို့ တိုးချဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး အခုနောက်ပိုင်းမှာ စနစ်သစ်ပညာရေးကို ထပ်ပြီးတော့ တိုးချဲ့နိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီပညာရေးစနစ်သစ်ဟာ ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင်ပြောသလို၊ ရည်မှန်းသလိုပေါ့လေ အလွတ်ကျက်တဲ့ ပညာရေးစနစ်ကနေပြီးတော့ ကျောင်းသားတွေ ကိုယ့်ဘာကိုယ် တီထွင်ဖန်တီးပြီးတော့ တွေးခေါ်နိုင်တဲ့ အဆင့်ရောက်အောင် ကျနော်တို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက် ထပ်ပြောချင်တာကတော့ ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင်လည်း အမြဲတမ်းပြောတယ်။ ပညာရေးမှာ အတန်းထဲမှာသင်တဲ့ ပညာရေးလိုအပ်သလို၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရေး … အဲဒါလည်း အရေးကြီးတယ်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရေးကို သေသေချာချာ ကျနော်တို့ လုပ်နိုင်မယ် ဆိုရင် ကျောင်းကနေပြီးတော့၊ ခါတိုင်းသမားရိုးကျပေါ့လေ၊ ကျောင်းကဆင်းလို့ရှိရင် အလုပ်ရှာတဲ့ဟာထက် ပိုပြီးတော့ ထိရောက်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရေးကိုလည်း ကျနော်တို့ ထပ်ပြီးတော့ မြှင့်တင်ပြီးတော့ ဒီဟာကို တိုးချဲ့နေတယ် ဆိုတာလည်း ပြောချင်ပါတယ်။
မင်းသန့်ဇင်ဦး-မေး။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျနော့်နာမည်က မင်းသန့်ဇင်ဦးပါ။ လက်ရှိ မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူပါတယ်။ ကျနော့်အသက်ကတော့ ၂၀၊ ကျနော်ဒီနေ့မှာတော့ ပထမဦးဆုံးကတော့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပထမဦးဆုံးမဲပေးမယ့် First Voter အနေနဲ့ အဓိကမေးချင်တာကတော့ ကျနော်တို့အဓိကဒေသက မွန်ပါတီနဲ့ လက်ရှိ အာဏာရပါတီဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီကို မေးချင်ပါတယ်။ မေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ အခု ကျနော်တို့ အားမရတဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပညာရေးပေါ့။ ပညာရေးရဲ့ ပေါ်လစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေမှာ နည်းနည်းလေး နှေးကွေးနေတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ ကျနော်တို့ အဆင့်မြင့်ပိုင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အခြေခံပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ် နှေးကွေးနေတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ အဲဒါကို အဓိက မေးချင်တယ်ပေါ့။ ပြီးတော့ ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့ ပါတီက နိုင်သွားခဲ့ရင်လည်း အဓိက ကျနော်တို့ မေးနေတဲ့ ပညာရေးကိုပဲ အခြေခံအရပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပေါ်လစီအရပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့် အရပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်မဲထည့်လိုက်တဲ့ ပါတီက အနိုင်ရသွားရင် စွမ်းစွမ်းတမံ အကောင်အထည် ဖော်ပေးစေချင်တယ်ခင်ဗျ။
NLD- ဖြေ ။ ဒီ ပါတီလက်ထက်မှာ ပညာရေးအသုံးစရိတ်ကို ကျနော်တို့ ဘယ်ခေတ်ကနဲ့မှ မတူတဲ့ ပညာရေးအသုံးစရိတ်ကို ရနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက အတန်းပညာရပ်လိုပဲ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရပ်ကို ကျနော်တို့ပိုပြီးတော့ မြှင့်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထပ်ပြီးတော့ ပြောချင်တာကတော့ ခုနကပြောတဲ့ အထဲမှာ ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတဲ့ စကားလုံးတစ်ခုကို ကျနော်ကြားမိတယ်။ ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့် ဆိုတာကတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းစကားနဲ့ ပြောရရင်တော့ ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာတဲ့ နိုင်ငံရေး လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ အတူတူပဲတဲ့။ နိုင်ငံရေးလွတ်လပ်ခွင့်ရှိရင် ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်လည်း ရှိမှာပဲတဲ့။ ဒီကနေ့က နိုင်ငံရေးလွတ်လပ်ခွင့်အများကြီး ရှိနေတဲ့ ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပညာရေး လွတ်လပ်ခွင့်ဟာလည်း ပိုပြီးတော့ ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ ကျနော် ပြောချင်ပါတယ်။
မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ- ဖြေ။ ။ အခြေခံပညာရေးကို အခမဲ့ပညာရေးစနစ်ဖြစ်အောင် အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ရယ်၊ နောက်ထပ် အဓိကကျတာက မိခင်ဘာသာစကားကို အခြေခံပြုတဲ့ ပညာရေးစနစ်ကို ကျနော်တို့ သွားဖို့လိုတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့နိုင်ငံဟာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ စုဖွဲ့နေထိုင်နေတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒီလို နေထိုင်တဲ့နေရာမှာ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားကလေးတွေနဲ့ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ဗမာ ကလေးတွေကို ယှဉ်လိုက်မယ်ဆိုရင်၊ တကယ့်ထိပ်ပိုင်းကို ရောက်တဲ့နေရာမှာ တိုင်းရင်းသား ကလေးတွေက အရည်အချင်းအားဖြင့် နိမ့်ကျနေတဲ့ အနေအထားတွေ ရှိတယ်။ ဒါ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရသလဲဆိုရင် သူတို့ မူလတန်းကျောင်းမှာ ပညာစသင်ကတည်းက သူတို့က သူတို့ရဲ့ မိခင်ဘာသာစကားနဲ့ ပညာသင်ကြားခွင့် မရခဲ့လို့ နားလည်မှုစွမ်းရည် နိမ့်ကျပြီးတော့ တကယ့်အဆင့်မီ ပညာရပ်ကို ဆည်းပူးတဲ့နေရာမှာ ဗမာကလေးတွေကို လိုက်မမီဘူးပေါ့ဗျာ။
အဲဒီတော့ ကျနော်တို့က တိုင်းရင်းသားတွေ နေထိုင်တဲ့ကျောင်းမှာ မိခင်ဘာသာစကားကို အခြေပြုတဲ့ ပညာရေးကို ကျနော်တို့ ဖော်ဆောင်သွားမယ်။ နောက်တစ်ခုက အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာ၊ တိုင်းရင်းသားကျောင်းတွေမှာ တိုင်းရင်းသားဘာသာကို တရားဝင် ဘာသာရပ်တစ်ခုအဖြစ် သင်ကြားဖို့အတွက် ကျနော်တို့က မူဝါဒရှိပါတယ်။
အိရွှေစင်-မေး။ ။ ညီမကတော့ အိရွှေစင်ဖြစ်ပါတယ်။ ညီမအသက် ၂၁ နှစ် ရှိပါပြီ။ ညီမက အခုလာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် မဲပေးရမယ့် လူငယ်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ညီမက တကယ်လို့ ပါတီတစ်ခုကို မေးခွန်းမေးခွင့်ရမယ်ဆိုရင် NLD ပါတီကို မေးခွန်းမေးချင်ပါတယ်။ အခု လတ်တလောမှာ ဖြစ်သွားတဲ့ ဖားကန့်ကိစ္စပေါ့နော်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ရှားပါးနေတော့ သူတို့ တရားမဝင်အလုပ်တွေ လုပ်ရတယ်။ အဲဒီလိုလူတွေအတွက် အလုပ်အကိုင်ကို သေချာရှာပြီးတော့ စီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ NLD ပါတီသာ အနိုင်ရမယ်ဆိုရင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းကို သေချာရှာပြီး စီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ဒါမှ လူ့အဖွဲ့အစည်းလည်း မြင့်တက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
NLD-ဖြေ- သမီးက ဖားကန့်ကိစ္စနဲ့ ဆက်နွှယ်ပြီးတော့ မေးတဲ့အခါကျတော့လေ၊ ဖားကန့်ကိစ္စကို အားလုံးသိတဲ့ အတိုင်းပါပဲ၊ ဖားကန့်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာက စကားတစ်ခွန်းတည်းနဲ့ ပြောမယ်။ စကားတစ်ခွန်းတည်းနဲ့ ပြောမယ် ဆိုလို့ရှိရင် အကန့်အသတ်ရှိတဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအောက်မှာ အကန့်အသတ်မရှိတဲ့ သယံဇာတကို တူးဖော်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ဖြစ်တာလို့ပဲ ပြောချင်တယ်။ နောက်တစ်ခါ ထပ်ပြီးတော့ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာဟာလည်း NLD အစိုးရအနေနဲ့ အများကြီး အလေးအနက်ထားပြီးတော့ ဖြေရှင်းနေတဲ့ကိစ္စ ရှိတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စကားနဲ့ ပြောရရင် အလုပ်လက်မဲ့ ပြဿနာထက် ယုံကြည်ချက်မဲ့ ဖြစ်တာမျိုးကိုတော့ မဖြစ်စေနဲ့ ဆိုတာမျိုးကိုပြောဖူးတယ်။ ယုံကြည်ချက် မမဲ့နဲ့ပေါ့။ အလုပ်လက်မဲ့တော့ ဖြစ်ချင်ဖြစ်၊ ယုံကြည်ချက် မမဲ့နဲ့ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို နည်းနည်းတော့ သတိထားဖို့ လိုလိမ့်မယ် ထင်တယ်။ ကျနော်တို့ဟာ ယုံကြည့်ချက် ရှိနေသရွေ့တော့ အလုပ်လက်မဲ့ ပြဿနာဟာ ပြေလည်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တို့တော့ ယုံကြည်တယ်။
NLD အစိုးရ အနေနဲ့လည်း လူငယ်တွေ ယုံကြည်ချက် မမဲ့အောင် ကျနော်တို့ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေး ကိစ္စကိုလည်း ကြိုးစားပြီးတော့ လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်း ပြောချင်ပါတယ်။
ပြန်လည်ဖြေကြားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုနဲ့ မေးသွားတဲ့လူငယ်တွေကော၊ ပြန်လည် ဖြေကြားပေးသွားတဲ့ ဆရာတွေကော ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် လူငယ်တို့ရဲ့ ရင်ဖွင့်သံတွေ
“ပြည်သူတွေက ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ရွေးချယ်လိုက်လို့ ရလာတဲ့သူက ကျမတို့ ပြည်သူတွေအတွက် ယုံကြည်မှု အလွဲသုံးစားမလုပ်ဘဲနဲ့ လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ ကျမတော့ အများကြီး မျှော်လင့်ထားတယ်။ ပထမဆုံး မဲပေးရမယ့် လူတစ်ယောက် အနေနဲ့တော့ အများကြီး စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ မဲတစ်ပြားက ဘယ်လောက် အထိ အရေးပါသလဲ၊ ဘယ်လောက်အထိ နိုင်ငံကို အကျိုးပြုသွားမလဲ ဆိုတာကို ကျမ အရမ်းကို စိတ်လှုပ်ရှားတယ်။”
“အခုဆိုရင် မွန်ပြည်နယ်မှာ အလုပ်လက်မဲ့တွေလည်း ရှိတယ်၊ အလုပ်မရှိသေးတဲ့ လူငယ်တွေလည်း ရှိတယ်။ ကျောင်းသားတွေအတွက် ဆိုရင်လည်း အချိန်ပိုင်းအလုပ်ကလေးတွေ လုပ်ပေးစေချင်တယ်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအတွက်ကို အများကြီး ရှိစေချင်တယ်၊ မွန်ပြည်နယ်မှာ။”
“၂၀၁၅ တုန်းက မဲစာရင်းပေါ့၊ အဘိုးတွေ၊ အဘွားတွေ ကြည့်နေကြတာ။ အခုမှ ကျနော်က စပေးရမယ် ဆိုတော့ မဲစာရင်းမှာ ပါမပါလည်း စိတ်လှုပ်ရှားတယ်။”
“ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကျမကတော့ ရင်ခုန်တယ်။ ရင်ခုန်တယ်ဆိုတာက ဘယ်လိုမျိုးတွေများ၊ ဘယ်လို အခြေအနေတွေ ဖြစ်လာမလဲပေါ့။ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ကော ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးမှာ ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားပြီး မဲပေးကြမလဲပေါ့။ ကျမတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့ လူငယ်တွေ အနေနဲ့ပေါ့။ ဘယ်လိုမျိုးတွေးထားမလဲ ဆိုပြီးတော့ ကျမကတော့ ရင်ခုန်ပါတယ်။”
“ကျနော့်မှာက အဲဒီလိုမျိုး အစွဲတွေ မရှိဘူး။ ကျနော်ပေးမယ့်ရည်ရွယ်ချက်က သူတို့ပြောတဲ့အရာနဲ့ သူတို့တကယ်လုပ်ပြလို့ အကောင်အထည်ပေါ်လာမယ့်၊ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မယ့် ပါတီမျိုးကို မဲပေးမယ်။ ကျနော့်မှာ တခြား အစွဲတွေဘာတွေ မရှိပါဘူး။”
“အခု ကျမအသက်က ၂၂ နှစ် ဆိုတော့လေ၊ ဟိုတုန်းက သူများမဲပေးတာ မြင်တော့ ကိုယ်လည်း မဲပေးချင်တယ်လေ။ ဒါပေမယ့် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ မဲပေးရမယ်၊ အခုတော့ ကိုယ်က ပြည့်ပြီဆိုတော့ ရင်လည်းခုန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ရွေးချယ်မယ့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို သေသေချာချာ လေ့လာပြီးမှ မဲပေးချင်တယ်ပေါ့နော်။”
လူငယ်တွေရဲ့ ရင်ဖွင့်သံတွေပြီးတဲ့နောက် ဆက်လက်ပြီးတော့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ မေးခွန်းမေးမြန်းတဲ့ အစီအစဉ်တွေကို ပြန်ပြီးတော့ စတင်ပါမယ်။
ဇင်ကိုထက်- မေး။ ။ ကျနော့်နာမည်ကတော့ ဇင်ကိုထက်ပါ။ Rainbow Star LGBTIQ+Co က တာဝန်ခံတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ NLD ပါတီကို မေးချင်ပါတယ်။ NLD ပါတီအနေနဲ့ ၂၀၁၅ ကနေ ၂၀၂၀ အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်လာတယ်။ NLD ပါတီအနေနဲ့ ဒေသတွင်း LGBT တွေရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဥပဒေအရ ဘယ်လိုထိရောက်စွာ ကာကွယ်ပေးဖို့ ရှိပါသလဲ။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ အခုဆိုရင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်း ထိုင်းအစိုးရအဖွဲ့က ပါလီမန်မှာ LGBT တွေကို ကာကွယ်ပေးမယ့် ဥပဒေတစ်ရပ်ကို အရှေ့တောင်အာရှမှာ ပထမဆုံး တင်သွင်းလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ NLD ပါတီကသာ အစိုးရဖြစ်လာရင် ဒီလိုလုပ်ပေးဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါသလား သိချင်ပါတယ် ခင်ဗျ။
NLD ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ NLD ပါတီကပေါ့လေ၊ လူအချင်းချင်း ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကို ဘယ်တုန်းကမှ အားပေးခဲ့တဲ့ ပါတီမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ စောစောပိုင်းက ပြောသလိုပေါ့၊ လူအချင်းချင်း ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကို ကျနော်တို့က ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကြေညာစာတမ်းကို ကျနော်တို့ လက်ကိုင်ထားတယ်။ အဲဒီ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းကို ကျနော်တို့က ကျင့်သုံးတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းမှာပါတဲ့ အချက်အလက်တွေ အတိုင်းပဲ လိုက်နာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် NLD ပါတီ အာဏာရလာသည်ပဲဖြစ်စေ၊ လူအချင်းချင်းခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ ကိစ္စကိုတော့ ကျနော်တို့က ဥပဒေကြောင်းအရ အတည်ပြုပြီးတော့ ကျနော်တို့ အလုပ်လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ဆိုတာကိုပဲ ကျနော် အတိုချုပ်ပြောချင်ပါတယ်။
ကိုပြည်မင်းထက်- မေး။ ။ ကျနော်မေးချင်တာကတော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကိုပါ။ ကျနော်မေးချင်တဲ့ မေးခွန်းကတော့ ကျနော်တို့ မွန်ပြည်နယ်မှာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ရေကြီးရေလျှံမှုတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စတွေကို အကယ်၍သာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကသာ တဖန်ပြန်နိုင်ခဲ့ရင် ဒီကိစ္စကို ဘယ်လိုမျိုး ကိုင်တွယ်ပေးမယ်လို့ ယူဆထားပါသလဲ။ နောက်တစ်ခုက အခု ကျနော်တို့ရဲ့ သံလွင်မြစ်ကမ်းပါးတလျှောက်နဲ့ ချောင်းကမ်းပါးတွေမှာ ကျူးကျော်နေထိုင်မှုတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကိုကော ဘယ်လိုမျိုး ကာကွယ်ပေးမလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။
မုံရွာအောင်ရှင်ဖြေ။ ။ ရေကြီးရေလျှံဖြစ်တဲ့ ကိစ္စကတော့ မြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းရေးနဲ့ ဆိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သံလွင်မြစ်တင်မကဘူး၊ ဧရာဝတီမြစ်လည်း ဒီလိုပဲ၊ ချင်းတွင်းမြစ်လည်း ဒီလိုပဲ။ နွေရာသီမှာ ရေခမ်းခြောက်တယ်။ မိုးရာသီမှာ ရေကြီးရေလျှံဖြစ်တယ်။ အဲဒါကဘာလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ ခေတ်အဆက်ဆက်ပေါ့လေ၊ မြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မြစ်တွေကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး မလုပ်နိုင်တဲ့ ပြဿနာပဲ။ အဲဒါ တစ်ချက်ပေါ့။ နောက် ဒုတိယ တစ်ချက်က သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အချက်ပေါ့။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဒီလို ရေကြီးရေလျှံဖြစ်တာတွေ၊ နွေရာသီမှာ ရေခမ်းခြောက်တာတွေဟာ ကျနော်တို့ ကြုံနေရတာပါ။
အဲဒါကြောင့် ကျနော်ပြောချင်တာကတော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးကို ကျနော်တို့ အဓိက လုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ ဒီပြဿနာ ပြေလည်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော်ယူဆတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ မြေပြိုတဲ့ကိစ္စတွေ။ မြေပြိုတဲ့ကိစ္စလည်း ဒီသဘောပါပဲ။ ဓာတ်သတ္တုတွေ အလွန်အကျွံတူးတာတွေ၊ သစ်တောတွေကို အလွန်အကျွံခုတ်ထွင်တာတွေ အဲဒါတွေကလည်း ရေကြီးရေလျှံတဲ့ပြဿနာ။ နောက်တစ်ခုက မြေပြိုတဲ့ပြဿနာတွေက အဲဒီလို ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်တို့က ယူဆတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ဘယ်အစိုးရပဲတက်တက်၊ ကျနော်တို့ NLD အစိုးရပဲတက်တက်၊ ဘယ်အစိုးရပဲတက်တက် ဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှုကို သေသေချာချာ မလုပ်ဘူးဆိုရင် ဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေကို ကြုံတွေ့နေရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီသင်ခန်းစာကို ယူပြီးတော့ ရှေ့လျှောက်မှာလည်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းပြီးတော့ သေသေချာချာ လုပ်နိုင်မယ် ဆိုရင်တော့ ခုနကပြောတဲ့ ရေကြီးရေလျှံပြဿနာတွေ ကင်းစင်မယ်လို့ ကျနော်ယေဘုယျ ဒီလောက်ပဲ ပြောနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
မမြတ်နိုးခင်- မေး။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျမက အခု NLD ပါတီကို မေးချင်တာပါရှင့်။ ကျမမေးချင်တဲ့ မေးခွန်းကတော့ ကျမတို့ မွန်ပြည်နယ်မှာဆိုရင် လူတန်းစားပေါင်းစုံနေထိုင်ကြတာပေါ့။ လူတန်းစားပေါင်းစုံ ဆိုတဲ့နေရာမှာ အကုန်လုံး ပါပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေကော၊ နောက်ပြီးတော့ ဘာသာပေါင်းစုံကော၊ ပြီးတော့ ကျား၊ မ၊ LGBT အကုန်လုံးကို ဆိုလိုတာပါ။ အဲဒီတော့ ဒီမွန်ပြည်နယ်မှာ လူတန်းစားပေါင်းစုံ တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေး ရဖို့အတွက် ဘယ်လိုမူဝါဒတွေနဲ့ လုပ်ဆောင်ဖို့ စီစဉ်ထားလဲ ဆိုတာလေးကို သိချင်တာပါရှင့်။
NLD- ဖြေ။ ။ ခုနကမေးတဲ့ လူတန်းစား ညီမျှမှု ဆိုတာကတော့ နည်းနည်းတော့ ကျယ်ပြန့်တယ်။ လူတန်းစား ညီမျှမှု ဆိုတာထက် လူတွေအချင်းချင်း အညီအမျှဖြစ်ဖို့ဆိုတာက အရေးကြီးတယ်လို့ ထင်တယ်။ လူတန်းစား ဆိုတာကတော့ နည်းနည်းလေး လူရဲ့ အတန်းအစားတွေ အများကြီးကို လိုက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့က ညှိနေရလိမ့်မယ်။ ပြောချင်တာကတော့ ပြည်သူပြည်သား အားလုံးပေါ့၊ ပြည်သူပြည်သား အားလုံး အညီအမျှဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုတဲ့ စဉ်းစားနည်းကို စဉ်းစားကြရမယ်။ အဲဒီ စဉ်းစားတာက ဘာလဲဆိုတော့ ဒီမိုကရေစီပဲ။ ဒီမိုကရေစီသာ တကယ်တမ်း ပြည့်ပြည့်ဝဝ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ လူအချင်းချင်း အားလုံးဟာ အညီအမျှဖြစ်မယ်၊ လူအချင်းချင်း အခွင့်အလမ်းတူမယ်၊ အဆင့်အတန်းတူမယ်၊ အဲဒီအဆင့်ကို ရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ ရလို့ရှိရင်တော့ လူတန်းစားပဲပြောပြော၊ လူတန်းစားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးပဲ ပြောပြော ရသင့်ရထိုက်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ရနိုင်မယ်လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ဒီမိုကရေစီပါပဲ။
ဒီနေ့ Any Questions? အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ပြီးတော့ မေးခွန်းတွေကို မေးပေးကြတဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်မဲပေးရမယ့် လူငယ်တွေကိုရော ဖြေပေးကြတဲ့ ပါတီက တာဝန်ရှိသူတွေကိုပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီအစီအစဉ် ဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက် ကူညီကြတဲ့ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
Tags: Any Questions?nldUSDPမွန်ပြည်နယ် အစီအစဉ် ဒုတိယပိုင်း၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ
Previous story ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါအား ဦးစွာတိုက်ထုတ်ရန် ဆန္ဒပြသူများကို ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် တိုက်တွန်း
Next story တိကျမှုနည်းသည့် ကိုဗစ်-၁၉ စစ်ဆေးမှုကို အမေရိကန်ပညာရှင်များ စိုးရိမ်